किन आउँदै छिन् स्वराज ?::Nepalese News Portal
किन आउँदै छिन् स्वराज ?
काठमाडौँ ।भारतीय विदेशमन्त्री सुषमा स्वराज नेतृत्वको उच्चस्तरीय कूटनीतिक टोली दुईदिने भ्रमणका लागि बिहीबार काठमाडौं उत्रने भएको छ । नेपालमा नयाँ सरकार गठनको पूर्वसन्ध्यामा स्वराज भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको राजनीतिक सन्देश लिएर आउन लागेको स्पष्ट हुन्छ ।
आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ – भारतीय विदेश मन्त्रालयले स्वराजको भ्रमण दुई देशबीच उच्च राजनीतिक भेटघाटको निरन्तरता भएको बताएको छ । नेपाली पक्षले भने भ्रमणबारे अझैसम्म औपचारिक सूचना पाएको छैन, उनी काठमाडौं आउन लागेको जानकारीमात्र पाएको जनाएको छ । स्वराज बिहीबार काठमाडौं आइपुग्नेबारे सोमबार अबेर जानकारी पाए पनि उनी कति बजे काठमाडौं उत्रने, त्यसपछिको कार्यतालिका के–के छ भन्नेबारे मंगलबार साँझसम्मपरराष्ट्र मन्त्रालयको शिष्टाचार महाशाखा अनभिज्ञ छ ।
भ्रमणबारे निर्वाचनपछि ‘कामचलाउ’ बनेको शेरबहादुर देउवा सरकार आफैं स्पष्ट छैन । प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार दिनेश भट्टराईले भ्रमणबारे टिप्पणी गर्न चाँडो हुने जनाउँदै यसमा परराष्ट्र मन्त्रालयले काम गरिरहेको बताए । परराष्ट्र सहप्रवक्ता रामबाबु ढकालले विदेशमन्त्री आउने जानकारी भएको र दुईपक्षीय वार्तालगायतको तयारी भइरहेको जनाए । ‘आज (मंगलबार) बिदा छ । बुधबार अपराहन हामी केही दिन सक्छौं । छलफलका विषय र एजेन्डाबारे बुधबार नै जानकारी हुनेछ,’ उनले भने ।
चीनले आफूले सहयोग गरेका नेपालका अधिकांश यातायात परियोजनालाई भारतीय बृहत् बजारसम्म पहुँच स्थापित गर्ने दृष्टिकोणबाट हेरिरहेको विश्लेषण भारतीय सञ्चार माध्यममा पढ्न पाइन्छ । बेइजिङले औपचारिक रूपमै चीन र भारतबीच हिमालयपार सहकार्य क्षेत्रको विकास गर्ने अवधारणासाथै चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले अघि सारेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) मा नेपालको उपस्थिति अर्थपूर्ण रहेको अवस्थामा भारत नेपालमा आफ्नो सम्बन्ध सुमधुर पारेर अघि बढ्न चाहेको हो ।
यसअघि विदेशमन्त्री भएलगत्तै २०७१ साउन ९ मा काठमाडौं उत्रेर स्वराजले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई महत्त्व दिएकी थिइन् । उनको त्यो थालनीले मोदीको नेपाल भ्रमण भयो, जुन भ्रमणलाई १७ वर्षपछि भारतीय प्रधानमन्त्रीको ऐतिहासिक भ्रमणका रूपमा लिइएको थियो । तर, त्यसले बनाएको सकारात्मक माहोल लामो समय टिक्न पाएन । त्यसको केही समयपछि २०७२ असोजमा संविधान जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढेपछि भारतका तत्कालीन विदेशसचिव एस जयशंकर काठमाडौं आइपुग्दासम्म नेपाल–भारत सम्बन्ध पूर्णत: बिग्रिसकेको थियो । त्यही भ्रमणको आडमा भूकम्पका कारण जनजीवन थिलथिलो भएको अवस्थामा भारतले नाकाबन्दी नै लगाएर अमानवीयतासमेत प्रकट गर्‍यो । त्यो नेपाली जनताले भुलेका छैनन्, जुन गल्ती स्वीकार गरेर सच्चिने प्रक्रियामा भारत अगाडि बढ्न खोजेको हो भने स्वराजको सक्रियतालाई सकारात्मक रूपमै लिनुपर्ने हुन्छ ।
मोदीलाई ओलीको सन्देश ‘द्विपक्षीय हितमाकाम गर्न उत्सुक छु’
काठमाडौं (कास)– एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले आफू भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र उनको सरकारसँग द्विपक्षीय हितका लागि काम गर्न उत्सुक रहेको बताएका छन् । भारतीय गणतन्त्र दिवसको अवसरमा मोदीलाई सन्देश पठाउँदै ओलीले दुई देशबीचको सम्बन्ध थप मजबुत बनाउन सँगै काम गर्न चाहेको उल्लेख गरेका हुन् । ‘यो अवसरमा सबै प्रकारका सफलताका लागि शुभेच्छा व्यक्त गर्न चाहन्छु र दुई देश तथा जनताबीचको सहकार्य अझ मजबुत हुने अपेक्षा राख्छु,’ सन्देशमा ओलीले भनेका छन्, ‘भर्खरैको निर्वाचनबाट चुनिएको जनप्रतिनिधि र संघीय संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा म दुई देशको उज्ज्वल भविष्यका लागि सँगै काम गर्न उत्सुक छु ।’
ओलीले सन्देशमा सार्वभौमसत्ताका लागि गरिएको बलिदान र ती संघर्षहरूको परिणामलाई संस्थागत गरेको महत्त्वपूर्ण इतिहास भारतको रहेको पनि उल्लेख गरेका छन् । ‘भारतको संविधान जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले लेखेको जनताको भावना र आकांक्षाको समुचित र विस्तृत दस्तावेज हो,’ भारतीय राजदूतावासमार्फत पठाइएको सन्देशमा भनिएको छ । उनले भारतीय संविधान कार्यान्वयनको अनुभवबाट सिक्दै गरेको उल्लेख गर्दै त्यसतर्फ पहिलो पाइला चालेको र हालै मात्र संघीय, प्रान्तीय र स्थानीय तह गरी तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेको उल्लेख गरेका छन् । केही दिनअघि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले पनि ओलीलाई फोन गरी भावीप्रधानमन्त्री भन्दै बधाई दिएका थिए । यसै साता भारतीय परराष्ट्रमन्त्री सुष्मा स्वराज दुईदिने नेपाल भ्रमणमा नेपाल आउँदै छिन् ।